Jun192020 by roshanNo Comments
वि.सं. २०२५ साल मंसिर २७ गते इलामको सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर ३ पशुपतिनगरमा जन्मिएका तारानाथ पौडेल पेशाले शिक्षक हुन् । उनी शिक्षकमा मात्र नभएर साहित्यमा पनि रुची राख्छन् । उनै साहित्यकार पौडेलद्धारा रचित २ कविता प्रस्तुत छ । चौतारीमा पर्खीबस भेटन आउँला सानी । चौतारीमा भेटन आउँला पर्खीबस सानी गुलाफको फुल टिपि लेयाउला तिम्लाई भनि फुलमात्र होइन सानी माला पनि लेयाउछु हातमा चुरा गला पोते सिंदुर शिरमा सिंदुर लाउछु सपना त सजाए थे दिन्छेउ साथ भनि पलभरमानै अस्ताई गयो जात मृत्यु बनी पवन पनि कस्तो बहने कोइबेला आउने रुकुम जिल्ला बिक थरको घरमा केटि धाउने माया भन्ने कस्तो खेल ज्यान पनि लिने बाचा गर्या थियोे होला जीवन बिताइ दिने हिर्दयमा चोट लाग्यो परिवारजनको बिच किन भेदभाब मानब एकहुन हुन्न उच निच धर्म नाश पाप धेरै हुनथाल्यो अती जातीय भेदभाव गर्दा हुने एस्तै एस्तै खती थोरै स्त्री
काठमाडौं – महानगरीय अपराध महाशाखामा गत साता उजुरी लिएर एक किशोरी पुगिन् । लिभिङ टुगेदरमा बसेका युवाले पुराना भिडियोलाई लिएर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेको उनले सुनाइन् । उनी ११ कक्षामा अध्ययनरत छिन् । फेसबुकमा भेटिएका युवासँग उनको प्रेम बस्यो । तिनै युवाले अ श्लील भिडियो सार्वजनिक गर्ने ध’म्की दिए । किशोरीको उजुरीपछि प्रहरीले ती युवालाई पक्राउ गरेर ल्यायो । ‘हामीले सहमतिमै भिडियो खिचेका हौं’, उनले बयानमा भने, ‘उनले मसँग रिलेसन राख्न नचाहेपछि त्यसलाई बाहिर ल्याउने ध म्की दिएको हुँ ।’ ख्यालख्यालमै भिडियो खिचे । घटनाले ठूलो रूप लिएपछि किशोरी डिप्रेसनमा गएकी छन् । परिवारले उनलाई मनोपरामर्श दिएर राखेको छ । कीर्तिपुरमा डेरा बस्ने एक किशोरी र ठमेलको डान्सबारमा काम गर्ने युवकबीच फेसबुकमा चिनजान भयो । किशोरीको इच्छा डान्सर बन्ने थियो । युवकले आफ्नै डान्सबारमा काम गर्न सुझाए । राति मात्रै डान्सबा
भारतमा पोला पर्वमा साँढेको पूजा गरिन्छ । मानिसहरु साँढेलाई मीठा–मीठा परिकार खुवाउँदै सुनका गहनासमेत टाउकोमा लगाइदिएर साँढेको पूजा गर्दछन् । यसरी साँढेको पूजा गरेपछि मनको इच्छा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ । तर भारतको महाराष्ट्रमा एउटा परिवारका लागि साँढेको पूजाले ठूलै समस्या सिर्जना गर्यो । महाराष्ट्रको अहमदनगर जिल्लास्थित रायटे वाघापुर गाउँकी एक महिलाले आफ्नो डेढ लाख भारु मूल्य पर्ने सुनको मंगलसूत्र साँढेको टाउकोमा लगाइदिएर पूजा गरिन् । त्यसपछि उनले उक्त मंगलसुत्र साँढेको टाउकोबाट निकालेर साँढेलाई खुवाउने रोटीको प्रसाद भएको थालीमा राखिन् । त्यही बेला अचानक बिजुली गयो र उनी मैनबत्ती लिनका लागि घरभित्र गइन् । जब उनी मैनबत्ती बालेर साँढे भएको ठाउँमा आइन् तब उनको होसहवास् उड्यो । किनकि उनले मंगलसूत्र राखेको प्रसादीको थाली रित्तै थियो । उनी आत्तिइन् र आफ्नो श्रीमानलाई चिच्याएर बो
साफ यू–१८ च्याम्पियनसिपमा नेपालको लक्ष्य : उपाधिमा ह्याट्रिक
Posted in खेलकुद, रोचक
२ असोज, काठमाडौं । साफ यू–१८ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता असोज तीन (भोलि) देखि सुरु हुँदैछ । हलचोकस्थित एपीएफको खेलमैदानमा भोलि दिउँसो तीन बजे उद्घाटन खेलमा नेपालले माल्दिभ्सको सामना गर्दैछ । डिफेन्डिङ च्याम्पियनसमेत रहेको घरेलु टोली नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा माल्दिभ्सलाई पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समूह ‘ए’ मा नेपालसँगै माल्दिभ्स र भुटान रहेका छन् । त्यस्तै, समूह ‘बी’ मा भने बंगलादेश, श्रीलंका र भारत रहेका छन् । बिहीबार भएको प्रि–म्याच कन्फ्रेन्समा नेपालका प्रशिक्षक चेतनारायण श्रेष्ठले उपाधि जित्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले योभन्दा अगाडि दुई पटक उपाधि जितिसकेका छौं । यो पटक हामीलाई निकै चुनौती छ । हामी उपाधि जित्दै ह्याट्रिक पूरा गर्ने लक्ष्यमा छौं ।’ यो प्रतियोगिताकै लागि भनेर नेपाली युवा टिमले पोखरा गएर अभ्यास गरेको छ । प्रतियोगि
चियापत्तीले सेतो कपाललाई कालो बनाउँछ, अन्य घरेलु उपाय यस्ता छन
छोटो उमेरमा नै कपाल फुल्ने समस्याले अधिकांशलाई सताइरहेको हुन्छ। तर, सेतो कपाललाई अझ बढि सेतो हुन नदिन साथै कालो बनाउने उपायहरू हाम्रै घरमा नै हुन्छन्। हेरौँ, सेतो कपालको समस्यालाई रोक्ने घरेलु उपायहरूः १. चियापत्ती १ लिटर पानीमा २ चम्चा चियापत्ती राखेर उमाल्नुहोस्। मनतातो भएपछि त्यस पानीलाई छानेर त्यसैले कपाल धुनुहोस्। यसपछि स्याम्पूको प्रयोग नगर्नुहोस्। २. निबुवा शुद्ध नरीवल तेलमा थोरै निबुवाको रस मिसाएर एकछिन उमाल्नुहोस् । नुहाउनुभन्दा १० मिनेट पहिला यस तेलले कपालको मालिस गर्नुहोस्। ३. अदुवा अदुवालाई पिसेर त्यसमा दूध मिसाई गाढा पेस्ट बनाउनुहोस्। यो पेस्टलाई कपालमा लगाउनुहोस्। १० मिनेटपछि सादा पानीले धुनुहोस्। यो विधि हप्तामा १ चोटि गर्नुहोस्। ४. अमला बदामको तेलमा अमलाको रस मिसाउनुहोस्। यस तेलले दैनिक कपालको मालिस गर्नुहोस्। ५. कफी कालो चियापत्ती वा कफीलाई १
Sep172019 by roshanNo Comments
तल्लो तहका पुलिस कर्मचारीहरूले हाम्रो देशमा पनि राजीनामा दिने क्रम उच्च छ । उता भारतमा पनि एउटा यस्तै राजीनामासम्बन्धी घटना भएको छ । भारतजत्रो सवा अर्ब बढी जनसंख्या भएको देशमा एकजना पुलिस जवानले राजीनामा दिनु कुनै नौलो कुरा होइन । तर उनले राजीनामाले जताततै चर्चा बटुलेको छ । हैदरावादको एक पुलिस चौकीमा कार्यरत २९ वर्षीय सिद्दान्थी प्रताप नामका प्रहरी जवान बिहे गर्न चाहन्थे । तर, उनको चौबीसघण्टे ड्यूटीका बारेमा थाहा पाएसँगै कोही पनि केटीका बाबुआमा उनलाई छोरी दिन राजी भएनन् । जागिरका कारण केटीले नै नपत्याउने अवस्था आएपछि उनले अन्ततः पुलिसको जागिरबाट हात धुने निर्णय गरे । हैदरावादका पुलिस आयुक्तलाई पत्र लेखी उनले आफूले राजीनामा दिनुपर्नाको कारण उल्लेख गरेका थिए । उनी लेख्छन्, ‘चौबीसै घण्टा जागिर, सप्ताहन्तमा बिदा पनि छैन । इन्जिनियरिङको पढाइ सकेर पुलिसको जवान पदमा भर्ना भएको पाँच व
भदौरे झरीमा रुझेको काठमाडौं
Posted in मुख्य समाचार, रोचक
३१ भदौ, काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौं उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा दिनको अधिकांश समय पानी पर्‍यो । विगत वर्षमा मनसुनी वर्षा अन्त्य हुने समय भइसक्दा पनि यो वर्ष केही दिनयता लगातार पानी परिरहेको छ । बंगालको खाडीबाट अएको जलवाष्प युक्त हावाको प्रभावका कारण भदौ महिनाको अन्तिम दिनसमेत वर्षा भइरहेको छ । वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसाधारणको दैनिक कामकाजमा असर परेको छ । फुटपाथमा ब्यापार गरेर जीविका चलाउनेहरु वर्षाका कारण मारमा परेका छन् । सडक हिलो भएका कारण पैदलयात्रीलाई हिँडडुल गर्न कठिनाइ भएको छ । विद्यालय, कार्यालय हिँडेर जानुपर्नेहरु छाता ओढेर हिँडेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले रेनकोट लगाएर ड्युटि गरिरहेका छन् ।